Xulka Algeria oo markoodii labaad ku guuleystay koobka qarammada qaaradda Afrika kaddib markii ay caawa garaaceen Senegal – Gool FM
Haaruun July 19, 2019
(Qahira) 19 Luulyo 2019. Xulka qaranka Algeria ayaa caawa markoodii labaad ku guuleystay koobka qarammada qaaradda Afrika kaddib markii ay kulankii final-ka ahaa garaaceen dhiggooda Senegal.
Kulankan oo ahaa mid adag ayey Algeria 1-0 uga adkaadeen Senegal goolkaasoo yimid bilowgii ciyaarta.
Ciyaarta oo socota labadii daqiiqo ee ugu horreysay ayaa waxaa goolka qura ee kulankan dhaliyey Baghdad Bounedjah kaddib markii laad xoog ahaa ku tuuray goolka Senegal kaddib caawin uu ka helay Ismael Bennacer kulanka ayaana sidaas lagu kala nastay 1-0 lagu hoggaamiyey Senegal.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta labada xul ayaa isku helay fursado halis ah oo goolal loo filan karay balse kulanka ayaa waqtigii loogu talo galay ku soo dhammaaday 1-0 ay ku adaadeen wiilasha Algeria.
Xulka Senegal waligiisa kuma guuleysan tartankan koobka qarammada qaaradda Afrika halka Algeria ay caawa markoodii labaad taariikhda ku guuleysteen tartankan kaddib markii ay horay u qaadeen 1990-kii, waxaana ay soo gabagabeeyey 29-sano oo ay sugayeen hanashada koobkan.